ပိုက်ဆံဖြုန်းတဲ့ပိုစ့်လေးတင်မယ်ပြောထားတော့ စာရေးပျင်းတဲ့ လမင်းတင်လိုက်ပါ၏..:P
တကယ်တော့လမင်းအနေနဲ့ ပိုက်ဆံဖြုန်းတာလို့ပြောရပေမဲ့ အချို့သူတွေအနေနဲ့တော့ သုံးတာပေါ့..လမင်းက မိသားစု အတွက်ထောက်ပံ့နေရသူပါ.. သူများတွေလိုလည်း မသုံးနိုင်ပါဘူး။။ အမှန်အတိုင်ပြောရရင် ဈေးကြီးတာဆို အနားတောင်မကပ်ဖူးတာ အလိုလိုကြောက်နေ တတ်တာလေ....အ၀တ်အစားဆိုလည်း တစ်နှစ်ပြည့်လို့ တစ်ထည်ဝယ်တာရှားတယ်။။။။ အိမ်မှာနေတုန်းကတော့ အမေ၀ယ်ပေးရင် ၀တ်လိုက်တာပဲ ... အခုထိလည်း မ၀ယ်တတ်ပါဘူး...
တစ်ခါတလေဈေးဝယ်ထွက်လို့သူများအတင်းတိုက်တွန်းရင်တော့ ၀ယ်ဖြစ်တယ်.... $ 30 ထက် မကျော်ဘူးး.. :P ကြွားတာ သုံးတာနဲ့ ဖြုန်းတာကိုလည်းသေချာ လမင်းချိန်းဆရပါတယ်... တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆို ငါသုံးလိုက်တဲ့ငွေက ဘာအကျိုးရှိလည်း ဆိုလည်းတွေးပြီးမှ လုပ်ရတာမျိုးပါ။။။။ သူများတွေကပြောတယ် လမင်းနင်လည်း ပိုက်ဆံပဲရှာနေတယ်..ကိုယ်အတွက်လည်း သုံးပါအုံး သူများအတွက်ပဲ ရှာနေတော့မှာလား။။။ငါအတွက်သုံးပါတယ်.... ငါလှူခဲ့တာတွေက ငါသုံးတာတွေပဲပေါ့လို့ ..
လမင်းတတ်နိုင်သလောက်တော့လှူပါတယ်.. သူများတွေလိုတော့ အများကြီးမလှူနိုင်ပါဘူး။။။ ကိုယ်သုံးမဲ့ အထဲက လှူတတ်ပါတယ်...........အခုက ပြန်ချိန်လည်းနီးလာတော့ မသွားဖူးတဲ့နေရာလေးတွေ သွားမယ်စိတ်ကူးလေးနဲ့ပေါ့.... မပြန်ခင်တော့ သွားနေအုံးမှာပဲ ဘာဖြစ်လည်း ကိုယ်ရှာတာ ကိုယ်သုံးတာဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဥပေက္ခာပြုထားပါတယ်။။။ :D......အမေကလည်းမှာပါတယ်.. သမီးရယ် အိမ်အတွက်ပဲကြည့်မနေပါနဲ့။ ကိုယ့်အတွက်လည်းကိုယ်သုံးပါတဲ့ ....အမေစကား နားထောင်တာပါ....:P စကားရှည်နေပါပြီးကြွားတော့မယ်....
(၁) ပထမက ဒီကွန်ပျုတာလေးဝယ်လိုက်ပါတယ် တကယ်တော့မလိုပါဘူး အခုသုံးနေတဲ့ စက်ကလည်းကောင်းနေပါတယ်... မလိုပဲဝယ်တာဆိုတော့ဖြုန်းတာခေါ်မလား သုံးတာခေါ်မလား။။
(၂) ဒုတိယ မျက်မှန် တကယ်ဝယ်ချင်တာက $ 180 တန်ပါ.. ၀ယ်ဖြစ်လိုက်တာကaတာ့ $ 99. စိတ်ကိုဒုန်းဒုန်းချပြီး ၀ယ်လိုက်ပါတယ်... ဒါလည်းမလိုဘူး... တစ်ခုရှိတယ်...$30 တန်လေးပေါ့.. ဒါလည်းဖြုန်းလိုက်တာပဲ....:P
(၃) တတိယ ... နာရီပါ... ဒါလည်းဖြုန်းတာပဲ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လမင်းမှာတစ်ခုရှိတယ် အဲတစ်ခုတောင်
တစ်ခါမှမပတ်ဘူး... လက်ရှုပ်လို့ ဒီမှာကအချိန်ကို ဘယ်ကကြည့်ကြည့်ရတော့ နာရီလိုဘူးလေ..ဒါပေမဲ့ လျှော့ဈေးချနေတာနဲ့ လက်ဆောင်ပေးချင်ပေးလို့ ရအောင်ဝယ်ထားလိုက်တာ...:P
(၄) စတုတ္မ္မ္ထကတော့အဆိုးဆုံးပဲ Show ပွဲသွားကြည့်တာ တစ်ခါမှမကြည့်ဖူးဘူး..မြန်မာပြည်မှာလည်းမကြည့်ဖူးပါ... မြန်မာပြည်မှာတော့ ၂သောင်း ၃သောင်းဆိုတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာမှာရတာပေါ့လေ... အဲလိုကုန်မဲ့ပိုက်ဆံ လိုတာသုံးမယ်ဆိုပြီး လုံးဝမကြည့်တတ်ဘူး။။ အခုလည်းဖြစ်ချင်တာဖြစ် ကြုံခဲတယ်လေ အဆိုတော်နှစ်ယောက်လုံးကို လမင်းကြိုက်တာနဲ့ ကဲမထူးဘူးဆိုပြီးသွားကြည့်လိုက်တယ်....EnRque Iglesias & Jennfer lopez အဲနှစ်ယောက်လုံးက အရမ်းတော်တယ်.. အရမ်းလည်းကြိုက်တယ်.. သူတို့မှာလည်း ဇာတ်လမ်းလေးတွေရှိတယ်..
မပြောတော့ပါဘူး.သူတို့ နှစ်ယောက်အကြောင်းကို...စိတ်ရရင်ရေးမယ် . :P $100 တန်ကကြည့််လိုက်တာ နတ်ပြည်ရောက်နေသလား ထင်ရတယ်... အမြင့်ကြီး သူတို့နဲ့ နီးတဲ့နေကလည်း ၅၀၀.. ၆၀၀ ..၇၀၀ ၈၀၀တဲ့ ဘယ်ပေးမလည်း ကြည့်ဖူးတယ်ဆိုရင် ပြီးတာပဲလေ ၁၀၀ ဆိုတော်ရောပေါ့.. ဒါတောင် အပြောခံရသေးတယ်... ဘယ်သူလို့ထင်လည်း လမင်းချစ်သူပါ.. ပိုက်ဆံဖြုန်းတာတဲ့ အတင်းပြောရအုံးမယ်... သူကလမင်းထက်ကပ်စေးနှဲတယ် :P အခုလိုတွေ ရေးတာလည်းပြောအုံးမယ် ပွစိပွစိနဲ့ လူများသိအောင်လျှောက်ပြောနေတယ်ပေါ့... ပြောဆိုရှာကြံရေးရတာကို သူများတွေလိုလည်း ၀ထ္ထုတွေကဗျာတွေမရေးတတ်တော့ စိတ်ကူးပေါက်တာရေးတာပါ ...အားလုံး နားလည်ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။။။။။ :P ဗီဒီယိုလေးရိုက်ခဲ့တာခဲ့တာလေးပါ တင်လိုက်ပါတယ်.. ဓာတ်ပုံတွေတော့ အများကြီးပဲ ဟဲဟဲ ကိုယ့်ပုံပါနေတော့ မတင်တော့ပါဘူး...:P
Posted by ချစ်စံအိမ် at 2:00 PM
မင်းမုန်းတဲ့သူ August 2, 2012 at 4:25 PM
frozenjelly August 2, 2012 at 4:28 PM
mstint August 2, 2012 at 5:35 PM
ကိုယ်နှစ်သက်လို့ ဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို တန်ဘိုးထားနေသမျှ
အသုံးပြုတယ်လို့သာ ယူဆလိုက်ပါ လမင်းလေးရေ။ တူတူပါပဲ
တီတင့်လည်း ကဗျာတွေ ဝတ္ထုတွေမရေးတတ်လို့ ကိုယ်တွေ့ချည်း လှိမ့်ရေးတာ :P
KO2 August 2, 2012 at 9:13 PM
စံပယ်ချို August 2, 2012 at 10:05 PM
မစုနဲ့လို့မပြောပါဘူး စုလဲစု သုံးလဲသုံးပေါ့ ပစ္စည်းတွေက မလိုအပ်ရင်မ၀ယ်နဲ့လမင်းရေ
နိုင်ငံခြားမှာက အမြဲဈေးချတတ်ပါတယ် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုတော့ ၀ယ်သင့်တယ်
Sweety Snow August 2, 2012 at 10:17 PM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် August 2, 2012 at 11:04 PM
လွင်ပြင်လဲ အခုတလော ပိုက်ဆံဖြန်းနေသလိုပဲ ....
အလွမ်းမြို့ August 2, 2012 at 11:42 PM
ကြည့်ယုံလေးနဲ့တင် တံတွေးမျိုချ ပြန်တွားပါတယ်။
ခုလိုလေး စိတ်ထဲကဖြစ်တာလေး လုပ်ရတော့
ကျေနပ်တယ်ဟုတ်။ အဲတာက ချမ်းသာခြင်းဘဲ။
အိမ်မက်ကောင်းကင် August 3, 2012 at 12:49 AM
SHOW ပွဲကိုလည်း ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မကုန်ပဲ ကြည့်သွားတယ် :D
လရိပ်အိမ် August 3, 2012 at 3:25 AM
မြတ်ကြည် August 3, 2012 at 4:26 AM
ကိုယ့်အတွက်သုံးတာပဲ အစ်မရယ်။ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့ အရေးကြီးတယ် မဟုတ်လား။
မိုးသူ(တောင်ကြီး) August 3, 2012 at 6:38 AM
wow !!!1 လိုချင်စရာတွေ
သူများတွေလို ၀ယ်နိုင်တဲ့ ဘ၀မဟုတ်လေတော့
Candy August 3, 2012 at 9:39 AM
သုံးမယ့်သုံးတော့လည်း မနည်းမနောပါလား.. ဟိဟိဟိဟိ
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 4, 2012 at 4:07 AM
မျက်မှန်လေးလည်း ကြိုက်တယ်း)
ရာဇာထွေး August 4, 2012 at 7:01 AM
အဟီး...၀ယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ တကယ်အသုံးလိုတဲ့ပစ္စည်းမတွေ့
ဘူးရယ်... သီလရှင်သင်္ကန်း၊ စိတ်ပုတီး၊ ရောဂီသဘတ်၊ မောင်းတော်ချိုင့်
ဘာမှမပါဘူးရယ်... သီလရှင်နဲ့လက်တော့၊ သီလရှင်နဲ့မျက်မှန် နည်းနည်း
လွဲနေသလားလို့ ဟိဟိ... အင်း ၀ယ်လိုက်တော့လည်းအဖတ်တင်သွားတာ
ပေါ့ ညီမလေးရာ... ငွေဆိုတာဝင်လာပြီးရင် ထွက်ပေါက်ပေးထားရတယ်..
သမျှကိုပြန်ပေးမထွက်ရင် တိုင်းပြည်နစ်နာတယ် :D.. အဲစကားပုံတစ်ခုရှိ
ပေးညီမလေး...လူတော့အခိုက်မခံနဲ့...တော်ကြာ ဌက်ပြောတုံး၊ ဌက်ပြောတုံး
နော်... သုံးစရာနေရာမရှိရင်ပြော အကိုသုံးပေးမယ်..ကူညီချင်လို့ပါးP.....
ဖြိုးဇာနည် August 4, 2012 at 10:31 AM
လိုချင်တာကို မပိုင်ရတာကမှ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မူကျေနပ်မူ
တွေကိုဖြုန်းလိုက်တာပါ အခုက ပျော်ရွှင်မူတွေကို သုံးလိုက်တာပါ
study မှ မဟုတ်ရင် use မဟုတ်ဘူး
ပိုက်ဆံကို ဖတ်ဖို့ စာအုပ်ကောင်းကောင်းလေး
ဝယ်တာတောင် Spend ပဲ
နော်ကတော့ ကိုယ်လိုချင်တာ တစ်ခုခုဝယ်ပြီးရင်
richelle co August 5, 2012 at 10:56 PM
ညီရဲ August 6, 2012 at 12:13 AM
ကိုယ်ရှာတာ ကိုယ်သုံးတာ ဖြုန်းတယ်လို့ မခေါ်ဘူး... သုံးသာသုံး ညီမ... မြှောက်ပေးခဲ့ပြီ...:))
တွတ်တွတ် August 9, 2012 at 1:23 AM
ကျွန်တော်လဲ..DSLR ကင်မရာတစ်လုံးလိုချင်နေတာ..ကြာပေါ့ဗျာ။ မှန်ဘီလူးတွေကလဲ.မေးလိုက်ရင်..ဒေါ်လာ..1200 ဆိုတော့..ချွန်းလဲမ၀ယ်နိုင်..ဆင်လဲမပိုင်တဲ့ဘ၀မို့...ရှိတဲ့ ခင်မာလေးကို..တယုတယနဲ့ညင်သာစွာသုံးစွဲနေတဲ့ဘွ။
လက်တော့လေးကလဲ..လိုချင်ပြန်၊ (တစ်လုံးတည်းသောပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လက်တော့လေးကလဲ..ဟာ့ဒစ်စ်ဂိသွားလို့.ပြန်မလဲနိုင်သေး)